Infographic: Taariikhda Kooban ee Xayeysiiska Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
In kasta oo baraha bulshada badankood ay daahiriyaan awoodda iyo gaarista dabiiciga marketing warbaahinta bulshada, weli waa shabakad ay adag tahay in la ogaado iyada oo aan la dallacsiin. Xayeysiinta warbaahinta bulshada waa suuq aan jirin toban sano ka hor laakiin wuxuu soo saaray dakhli dhan 11 bilyan oo doolar sanadkii 2017. Tani waxay ka ahayd kaliya $ 6.1 bilyan sanadkii 2013.
Xayeysiisyada bulsheed waxay bixiyaan fursad lagu dhiso wacyigelin, yool ku salaysan juqraafi, dad -dad, iyo xogta hab -dhaqanka. Sidoo kale, xayeysiisyo badan ayaa si toos ah loogu dhejin karaa mawduucyada khuseeya. Qaar badan oo ka mid ah aaladaha ayaa sidoo kale bixiya fursado dib -u -suuqgeyn booqdayaasha ka tagay goobtaada ama gaadhigii wax iibsiga ee ku soo noqday bulshada.
Marwalba maan ahayn taageere xayaysiinta baraha bulshada, in kastoo. Ka labalaabiddayda xayeysiinta baraha bulshada ayaa ah ujeedka isticmaalaha warbaahinta bulshada. Haddii ay ku jiraan kooxo bulsho oo la bartilmaameedsaday halkaas oo dantu ay la mid tahay xayeysiinta, waxay soo saari kartaa natiijooyin wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, haddii ujeedka isticmaalaha uu yahay inuu booqdo qoyskooda iyo asxaabtooda oo aad sii waddo xayeysiinta aan khuseynin inta u dhexeysa… waxaa laga yaabaa inaadan helin natiijooyinka aad u baahan tahay inaad ku taageerto olole socda.
Qeyb kale oo muhiim ah oo ka mid ah xayeysiinta warbaahinta bulshada ayaa ah in la hubiyo in xiriiriyeyaashaada si sax ah loogu dhajiyay xogta ololaha. Maaddaama inta badan isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada ay adeegsadaan barnaamijyada, inbadan oo ka mid ah booqdayaashaas ayaa ku soo bandhigi kara booqasho toos ah adiga Analytics madal maadaama codsiyada aysan ka bixin tixraacaya ilo maaddaama xiriiriyaha la riixo oo biraawsar si toos ah u furmo.
Midaysan ayaa loogu talagalay sawir-gacmeedkan si loo muujiyo horumarka dhufto ee xayeysiinta bulshada. Midaysan waa xal dhammaad-ilaa-dhammaad u ah aragtiyaha xog-wadista, wanaajinta quudinta bulshada ee waqtiga-dhabta ah, iyo xayeysiinta barnaamijka ee dhammaan shabakadaha bulshada ee waaweyn ee hal goob.
Tags: EmarketerFacebookdakhliga facebook adxayeysiiska facebook apixayeysiiska moobiilka ee facebooksheekooyinka facebook kafaala qaadayafar geesoodLinkedIndakhliga ku xiran adigulinkedin xayeysiis apidakhliga xayeysiiska bulshadaxayeysiinta bulshadakharashka xayeysiinta bulshadawarbaahinta bulshadaxayaysiinta warbaahinta bulshadaturunturoontumblrTwitterdakhliga xayeysiiska twitterxayeysiiska twitter apixayeysiiska twitter api partnersdakhliga xayeysiiska mobaylka ee twitteryahooyoutube
Liven: Qabsasho iyo La Qaybgal Qofkasta oo Ka Qayb Gala Dhacdadaada Xiga
23, 2016 at 7: 01 AM
Waad ku mahadsantahay mahadsanid faahfaahinta xiisaha leh. Waxaan shaqsiyan kubilaabay khadka tooska ah sanadkii1998-kii kahor intaan Social Media xitaa laga fikirin hadana bal fiiri koritaanka! waxay ahayd fuulid waali ah 🙂 mahadsanid
Agoosto 13, 2021 saacaddu markay ahayd 1:00 PM
Xog -ururin fiican iyo marka la gaaro 2021 tirooyinka ayaa dhigaya tirada dadka hadda adeegsada warbaahinta bulshada inay gaarayaan 3.95 bilyan taas oo la yaab leh. Waxay u egtahay in baraha bulshada ay halkaan u joogaan si ay u sii sugnaadaan mustaqbalka dhow.